Vaovao - Hiakatra avo roa heny ve ny hafainganam-pandehan'ny famandrihana rehefa mampiakatra tariby sy tsy misy tariby miaraka?
Tsia, rehefa misy tariby sy tsy misy fiampangana amin'ny fotoana iray ihany, ny telefaonina dia tsy mahafantatra afa-tsy ny telefaonina charger hamelona. Noho izany,tsy ho avo roa heny ny hafainganam-pandehan'ny fiampangana rehefa mameno ny tariby sy tsy misy tariby miaraka.
Hipoaka ve izy raha miara-miasa amin'ny Wireless sy Wired?
Nanandrana izany ny ekipanay ary nanatsoaka hevitra fa tsy hipoaka izy io, fa tsy hanafaingana ny famandrihana. Rehefa mifandray amin'ny fotoana mitovy ny fomba fiampangana roa, na inona na inona filaharan'ny fifandraisana, ny IC famatsiana herinaratra an'ny finday dia manaiky ny hery omen'ny fiampangana tariby.
Ireto manaraka ireto dia fitaovana fitsapana, fomba ary angona.
Fitaovana fitsapana: iPhone12 (herin'ny fitsapana amin'ny 80%), LANTAISI 15W tariby tsy misy tariby magnetika, tariby data, metatra herinaratra.
1. Ny fitsapana voalohany (Toy ny sary eo ankavanana)
Nampiasa ny charger Wireless Magnet novokarin'ny LANTAISI mba hamenoana ny finday, ary mampiseho 9W ny metatra herinaratra (rehefa mamaly dia mihoatra ny 80%) ny herinaratra
2. Ny fitsapana faharoa (Tahaka ny sary eo ankavanana)
Rehefa mampiasa Magnet amin'ny fiampangana tsy misy tariby dia ampidiro miaraka ny tariby fiampangana iPhone12. Amin'izao fotoana izao, ny herin'ny Magnet dia aseho ho 0.4W, izay azo raisina ho toy ny hery standby.
Fotoana fandefasana: Nov-06-2021